जनसंवाद यात्राको चौधौँ दिन पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई धादिङमा, बूढीगण्डकी निर्माण छिटो सक्न माग
काठमाडौं, २८ माघ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसहित उनको टिम जनसंवाद यात्राको चौधौँ दिन धादिङ पुगेको छ । उनको टिमले यात्राको चौधौँ दिनमा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका जनसंवाद गरेको छ । डा. भट्टराईले ट्वीटरमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रिय गौरवको जलासययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण नेपाल आफैंले छिटो सक्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै स्थानीयलाई छिटो मुआब्जा उपल्ब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
उक्त जनसंवादकाक्रममा सल्यानटारको कुमाल बाहुल्य क्षेत्रमा सिंचाइ र रोजगारी प्रमुख समस्या रहेको भन्दै जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइएको थियो । जनसंवाद कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ शक्तिको टिम आज नै प्रदेश नम्बर ४ को आरूघाट प्रस्थान गरेको छ ।
जनसम्बाद यात्राको चौधौं दिन धादिंगको त्रिपुरासुन्दरी गापामा उत्साहजनक जनसम्बाद/जनभेटघाट!बुढीगण्डकी निर्माण नेपाल आफैले छिटो गर्नुपर्ने र मुआब्जा छिटो उपल्ब्ध गराउनुपर्ने माग! सल्यानटारको कुमाल बाहुल्य क्षेत्रमा सिंचाइ र रोजगारी प्रमुख समस्या!यात्रा आजै४ नं प्रदेशको आरूघाट प्रवेश! pic.twitter.com/nBJAUtOCSM
— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 11, 2019
‘असल राजनीति र समावेसी विकासका लागि जनसंवाद’ मुल नाराका साथ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले माघ १५ गतेदेखि जनसंवाद यात्रा सुरु गरेको हो । पूर्वको पाँचथरदेखि सुरु भएको यात्रा मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै एक महिनापछि फागुन १५ गते पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्नेछ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक हजार सात सय ७६ किमी यात्रा गर्दै जनतासँग संवाद गर्ने नयाँ शक्ति पार्टीले जनाएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालclose
उपनिर्वाचन बहिस्कार गर्छौं : मोहन वैद्य
‘पारसलाई किन कारवाही नगरेको ?’ भन्दै नेकपा सांसद जंगिए
रविसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, ५ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवाना माग
भष्ट्राचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौं : मन्त्री बाँस्कोटा
हेजबुल्लाहले २ वटा इजरायली ड्रोन खसाल्यो
रविसहित ३ जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा चलाउन प्रहरीको सुझाव
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
सामाजिक सञ्जालबाट सिडियोलाई गाली गर्ने गुप्ता प्रहरी खोरमा
शीर्ष नेता र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ : संयोजक मिश्र
प्रचण्ड र राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता
रवि लामिछानेसहित ३ जनालाई जिल्ला अदालत पेश गरियो
मदिराले मातिएका एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले अभद्र व्यवहार गरेपछि…
म्यानचेस्टर युनाईटेडलाई नमिठो झट्का
वायर्न म्युनिखको सानदार जित, कौटिन्होले पनि गरे डेब्यु
रियल मड्रिड बराबरीमा समेटियो
आर्सनलले लिभरपुललाई रोक्न सकेन
पूर्वराष्ट्रपति यादव भन्छन्-उपलब्धिको रक्षा गर्नु हामी सबै नेपालीको धर्म हो
कतिपय बुद्धिजीवी तथा मिडिया नै बहकिँदै गए: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनको उपाधि किर्गिस्तानलाई
कम्युनिष्ट भनेको भ्रष्टहरुको गिरोह जस्तो भयोः उपमहासचिव खतिवडा
रबिलाई तत्काल रिहा गर्न भन्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन